ukulungiswa kwezingxenye zokukhokha?
Umbuzo ukulungiswa kwezingxenye zokukhokha?
iminyaka 2 2 Sekwedlule amaviki #881 by dylviutter
hello guys at rikoooo! Nginakho ama-addon amahle angakhokhelwa kodwa angabonakali ukuthola izinkampani zokuthola imali. ungacela yini lokhu ukwenza into? im ecela ukulungiswa okunye:
El Al (kanye nempahla) (OC):
UCaptain Sim 737-200 (noma ukweluleka)
I-El Al (OC):
Siyabonga kakhulu uma kungenzeka ukuthi kungaba kuhle !!